Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » IATA: Tsy ny hetra no vahaolana amin'ny fitohizan'ny sidina
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fiankinana amin'ny hetra ho vahaolana amin'ny fanapahana ny fandefasana entona fiaramanidina ao amin'ny tolo-kevitry ny EU 'Fit for 55' dia tsy mamokatra amin'ny tanjon'ny fiaramanidina maharitra.
Aviation dia manolo-tena amin'ny decarbonization ho toy ny indostria manerantany.
Solika fiaramanidina maharitra maharitra izay mampihena ny entona hatramin'ny 80% raha oharina amin'ny lasantsy jet mahazatra.
Ny vina vinan'ny Aviation akaiky dia ny hanomezana fitaterana an-dranomasina maharitra sy mora ho an'ny olom-pirenena eropeana rehetra miaraka amina fiaramanidina matanjaka SAF, miasa miaraka amin'ny fitantanana fifamoivoizana mahomby.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) Nampitandrina fa ny fiankinan-doha amin'ny hetra ho vahaolana amin'ny fanapahana ny fandefasana entona fiaramanidina ao amin'ny tolo-kevitry ny EU 'Fit for 55' dia tsy mamokatra amin'ny tanjon'ny fiaramanidina maharitra. Ny politikan'ny vondrona eropeana dia mila manohana ireo fepetra fampihenana ny emission azo ampiharina toy ny famporisihana ny Sustainable Aviation Fuels (SAF) ary ny fanavaozana ny fitantanana ny fifamoivoizana amin'ny rivotra.
“Ny sidina avaratra dia manolo-tena amin'ny fanaparitahana firenena amin'ny maha-indostria manerantany. Tsy mila fandresen-dahatra na fepetra fanasaziana toy ny hetra izahay handrisihana ny fanovana. Raha ny marina, mandoa vola avy amin'ny indostria ny hetra izay afaka manohana ny fampihenana ny famatsiam-bola amin'ny haitao fanavaozana ny fiaramanidina sy ny teknolojia madio. Mba hampihenana ny fandefasana entam-barotra dia mila governemanta isika hampihatra rafitra politika mahomby izay, eo noho eo, dia mifantoka amin'ny famporisihana ny famokarana SAF sy ny fanaterana ny Sky European Single, ”hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Ny fanatratrarana ny fikajiana ny fiaramanidina dia mila fitambarana fepetra. Anisan'izany ireto:
Solika fiaramanidina maharitra izay mampihena ny entona hatramin'ny 80% raha oharina amin'ny lasantsy jet mahazatra. Ny tsy fahampian'ny famatsiana sy ny vidiny avo lenta dia voafetra hatrany amin'ny 120 tapitrisa litatra ny fandraisana ny zotram-piaramanidina amin'ny 2021 - ampahany kely amin'ny 350 miliara litatra izay lanin'ny kaompaniam-pitaterana amin'ny taona 'ara-dalàna'.
Fepetra mifototra amin'ny tsena hitantanana ny famoahana mandra-pivoaran'ny teknolojia tanteraka. Ny indostria dia manohana ny Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ho fepetra manerantany ho an'ny sidina iraisam-pirenena rehetra. Misoroka ny famoronana fehin-kibo amin'ny fepetra nasionaly na isam-paritra tsy mirindra toa ny EU Emissions Trading Scheme, izay mety hanimba ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Ny tetika mifanindran-dàlana dia mety hitarika amin'ny fandefasana emissions mitovy mihoatra ny indray mandeha. IATA dia manahy mafy amin'ny tolo-kevitry ny Vaomiera hoe tsy hampihatra ny CORSIA amin'ny sidina iraisam-pirenena intsony ny fanjakana eropeana.
Lanitra eoropeana tokana (SES) hampihenana ny fandefasana entona tsy ilaina amin'ny fitantanana fifamoivoizana an-habakabaka (ATM) ary hiteraka tsy fetezana. Ny fanavaozana ny ATM Eoropeana amin'ny alàlan'ny hetsika SES dia hampihena ny famoahana fiaramanidina eropeana eo anelanelan'ny 6-10%, saingy manohy manemotra ny fampiharana ny governemanta nasionaly.
Teknolojia vaovao madio madio. Na dia tsy azo inoana aza fa ny fihenan'ny herinaratra na hidrogen dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fandefasana fiaramanidina ao anatin'ny fe-potoana EU 'Fit for 55' amin'ny fe-potoana 2030, ny fampandrosoana ireo teknolojia ireo dia mitohy ary mila tohanana.
“Ny vina vinan'ny fiaramanidina akaiky dia ny hanomezana fitaterana an-dranomasina maharitra sy mora ho an'ny olom-pirenena eropeana rehetra miaraka amina fiaramanidina matanjaka SAF, miasa amin'ny fitantanana fifamoivoizana an-habakabaka mahomby. Tokony hitebiteby isika rehetra fa ny hevi-dehibe avy amin'ny Vondrona Eoropeanina hanaparitahana ny fiaramanidina dia mahatonga ny solika jet ho lafo kokoa amin'ny alàlan'ny hetra. Tsy hitondra antsika amin'ny toerana tokony hisy antsika izany. Hanimba asa ny hetra. Ny fanentanana ny SAF dia hanatsara ny fahaleovantenan'ny angovo ary hamorona asa maharitra. Ny fifantohana dia tokony hapetraka amin'ny famporisihana ny famokarana SAF, ary ny fanomezana ny Sky European Single, "hoy i Walsh.